विद्युत प्राधिकरणमा एकैपटक ८५ कर्मचारीको सरुवा, कसको कहाँ ? हेर्नुहोस् सूचीसहित - Everest Dainik - News from Nepal
विद्युत प्राधिकरणमा एकैपटक ८५ कर्मचारीको सरुवा, कसको कहाँ ? हेर्नुहोस् सूचीसहित
काठमाडौं : नेपाल विद्युत प्राधिकरणले एकैपटक ८५ जना कर्मचारीको सरुवा गरेको छ । प्राधिकरणले ९औं तहको उप प्रवन्धक, ८ औं तहको सहायक प्रवन्धक र ७ औं तहको इञ्जिनियरहरुको सरुवा गरेको छ ।
अधिकांश वितरण केन्द्र प्रमुखहरुको सरुवा भएको छ । नियमित रुपमा भदौ महिनामा कर्मचारीको सरुवा गर्दै आएको प्राधिकरणले यसलाई नियमित सरुवा भनेको छ ।
याे पनि पढ्नुस अन्ततः प्राधिकरणबाट बिदा भए कुलमान, किन भएन पुनः नियुक्ति ?
एउटा कार्यालयमा दुई वर्ष बसेका कर्मचारीको सरुवा गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । जसले चुहावट नियन्त्रण र सेवा सुधारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
कसको कहाँ भयो सरुवा ? यहाँ क्लिक गर्र्नुहोस् ।
ट्याग्स: कर्मचारी सरुवा, नेपाल विद्युत प्राधिकरण